प्रमुख दलहरुबीच सहमति हुन नस्क्दा संसद्को बैठक स्थगित - Kantipath.com
प्रमुख दलहरुबीच सहमति हुन नस्क्दा संसद्को बैठक स्थगित
काठमाडौँ । प्रमुख दलहरुबीच सहमति हुन नस्क्दा व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक अन्तिम समयमा आएर नियमित कार्यसूचीमा नै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ ।
संसद् सचिवालयले सूचनामार्फत बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको जानकारी दिएको छ । बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रमुख दलहरुबीच सभामुख ओनसरी घर्तीको पहलमा बैठक आयोजना गरिएको भए पनि आ–आफ्नै अडानमा कायम रहेका कारण कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन ।
सभामुख घर्तीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल गराए भएपनि एमालेको हठका कारण बैठक कुनै निष्कर्ष पुग्न नसकेको छलफलपछि नेताहरुले जानकारी दिए ।
सरकारले सोमबार तराई मधेसका क्षेत्रमा बढाएको स्थानीय तह फिर्ता हुनुपर्ने एमालेको माग रहेको छ । तराई मधेस केन्द्रित दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाएको बताउँदै आएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षीले संसद् अवरोध गर्ने धम्की दिएपछि प्रधानमन्त्रीले सदनलाई गर्न लागेको विशेष सम्बोधनसमेत रोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको र त्यसमा आम नेपाली जनताको उल्लेख्य सहभागितासहित सम्पन्न पारेको बधाई दिँदै सम्बोधन गर्ने तयारी थियो ।
प्रमुख सत्तारूढ दल काँग्रेससँग भएको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनेसमेत उनको तयारी थियो । संसद् बैठक नै चल्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनसमेत रोकिएको र एमालेको त्यस खालको कार्य गैरसंवैधानिक र संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको नेपाली काँग्रेसका सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ ।
प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्नुभन्दा अवरोध गर्नु एमालेको संसदीय चरित्र विपरीतको कार्य भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उनले भने, “संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन नै रोक्नुजस्तो गैरजिम्मेवार चरित्र अरू हुन सक्दैन । यद्यपि बुधबार बिहान ९ नौ बजे प्रमुख तीन दलका शीर्षनेताबीच छलफल गरेर एउटा निकास दिने निर्णय भने भएको छ ।”
परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेपाली काँग्रेसका नेता डा प्रकाशशरण महतले आफ्नो पार्टी र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच भएको सहमतिअनुसार नै सामान्यरुपमा सरकार परिवर्तन हुन लागेको बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षीले गैरराजनीतिक चरित्र देखाएको र संसद् अवरोध गरेर अराजनीतिक व्यवहार देखाएको बताए ।
नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने आफूहरुको सहमति विपरीत सरकारले स्थानीय तह थप गरेकाले आफूहरुले विरोध गरेको बताए ।
Previous Previous post: संसद् बैठक अझै सुरु भएन
Next Next post: तोडियो भक्तपुरका बस व्यवसायीको एकाधिकार, भोलिदेखि साझा चल्ने
नवनियुक्त गृहमन्त्रीद्वारा प्रहरी प्रधान कार्यालय निरिक्षण भ्रमण
काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा एक साता थप्ने तयारी
भोकमरीको चपेटामा बझाङकाे थलारा हलिया बस्ती, एउटै घरमा १०७ जनाको बसोबास !
बझाङ स्थायी घर भएकी राज्यमन्त्री बन्ने को हुन् आशा बिक ?
नोट हाम्रो, हात्ती कसको ? राष्ट्र बैंकको चरम लापरवाही, एकै नम्बरका २ नोट
गौर घटना : त्यो कालो दिन, महिलाहरुलाई बलात्कार गरी गुप्ताङ्गमा बाँसका लाठी घोंचेर, स्तन काटी जिउँदै जलाइयो !
‘कम्युनिष्टसँग विचारमा राजनीतिक प्रतिस्प्रधा गर्छाैँ’ -नेता पाैडेल
पूर्व सतर्कता अपनाउनको लागी रूपन्देही सुनचाँदीद्वारा पसल बन्दको आह्वान